• ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ပြပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှု အနည်းဆုံး(၄)ကြိမ် ခံယူပါ။ • မေးခို်င်ကာကွယ်ဆေး(၂)ကြိမ်ထိုးပါ။ • သံဓါတ်နဲ့ ဖေါလစ်အက်ဆစ်အားဆေးပြားကို မနက်(၁)လုံး၊ ည(၁)လုံး အနည်းဆုံး (၃)လ သောက်ပါ။ • အာဟာရပြည့်ဝစွာစားပါ။ • မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်ကို ရှ...
တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ လမ်းလျှောက် လေ့ကျင့်ခန်းယူတာကမွေးဖွားမယ့် မိခင်အတွက် မွေးဖွားရ လွယ်ကူစေသလို မွေးလာမယ့် ကလေးအတွက်လည်း ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းက ပေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ - (၁) မိခင်လောင်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြ့့ံခိုင်စေတယ်... ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံး နေ့စဉ်မှန်မှန် လမ်း...
ဒီအဖြူဆင်းခြင်းပြဿနာက အမျိုးသမီးထုအတွင်းမှာ အင်မတန်မှ အဖြစ်များပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆေးရုံတွေ၊ ဆေးခန်းတွေကို လာပြကြတဲ့ လူနာတိုင်းဟာ ကုသမှု ခံယူစရာမလိုဘူး။ လာသင့်လို့လာတဲ့ လူနာထက် စိုးရိမ်လို့ရတဲ့ လူနာက အရေအတွက် ပိုများနေပါတယ်။ အဖြူဆင်းတာကို အမျိုးအစားအားဖြင့် အဖြူဆင်းခြင်းနှင့် မူမမှန် အဖြူဆင်းခြင်း (၂) မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။ မူမှန်တဲ့ အဖြူဆိုတာ အပျိုဖော်ဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးတ...
အမျိုးသမီးတိုင်း အချိန်ရောက်လျှင် သွေးဆုံးခြင်းနှင့် မလွဲမသွေ ကြုံရဆုံကြမည်။ အပျိုဖော်ဝင် အရွယ်ရောက်ကတည်းက ရာသီသွေး စတင်ပေါ်ကြတယ်။ အပျိူဖော်ဝင်သည့် အသက်သည် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူကြ။ အသက် ၁၀ နှစ် ၁၇ နှစ်ကြား ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၁၄ နှစ် ပတ်လည်တွင် စပေါ်သည့် ရာနှုန်းက ပိုများသည်။ ထို့အတူ မီးယပ်သွေးဆုံးခြင်းတွင်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူကြ။ အသက် ၄၀ နှစ်မှ ၅၅ နှစ်ကြား ဖြစ်လေ့...
မျိုးဥအိမ် --------- မျိုးဥအိမ်ကို သားဥအိမ်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ မျိုဥအိမ် (Ovary) သည် ဆီးအိမ်၏ ဘယ်ညာတစ်ဖက်စီ၌ ရှိသည်။ မျိုးဥအိမ်သည် မျိုးဥ (ova) များကို သိုလှောင်ထားသည်။ ဖြစ်ပွားမှု ---------- အမျိုးသမီးများတွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ သားအိမ် အတွင်းမြှေးကင်ဆာများကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားမှု မများသော်လည်း အမျိုးသမီး မျိုးပွားအင်္ဂါ ကင်ဆာများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ကင်ဆာဖြ...
သားအိမ်ခေါင်းအဖုံး (Diaphragm) နဲ့ သုက်ပိုးသေဆေး (Spermicide)
သားအိမ်ခေါင်းအဖုံး (Diaphragm) ဆိုကတော့ ရာဘာနှင့်လုပ်ထားတဲ့ ပျော့ပြောင်းပြီး ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ အခုံးပုံသဏ္ဍာန် ပစ္စည်းလေးတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်။ ခေါက်လို့ရတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားပါဝင်တယ်။ သားအိမ်ထဲ သုက်ကောင်လေးမဝင်အောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးတယ်။ သုက်ပိုးသေဆေးတွေကတော့ ဂျယ်လီ ဒါမှမဟုတ် ခရင်မ်တွေ၊ ဆေးတောင့်တွေ၊ မှုတ်ဆေး၊ ဆေးပြား၊ ရေမြှပ်၊ ဒါမှမဟုတ် အရည်ပျော်တဲ့ ကော်ပြား ပုံစံမျိုးစုံရှိပြီး သုက်ကောင်လေးတွေကို သေစေ...
ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ ခြင်းကိုအသေးစားခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဟု မှတ်ယူသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦးအတွက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ရှုပ်ထွေးမှုများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သက် တမ်းရင့်လေ အန္တရာယ်ပိုများလေဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာတွင် မိန်းမအင်္ဂါ(သို့မဟုတ်)သားအိမ်ခေါင်း မှ ဘက်တီးရီးယားများ သားအိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကာ ရောဂါက...
ဓမ္မတာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗိုက်အောင့်ခြင်း များကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဓမ္မတာပိုင်းဆိုင်ရာဗိုက်အောင့်ခြင်းများနဲ့ တချို့ဆိုဓမ္မတာလာစဉ်မှာ မသက်မသာဖြစ်ခြင်းများကို တွေ့ကြုံခံစားကြရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့အချိန်ကာလမှာပိုလွယ်ကူပြီး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ၁။ လေ့ကျင့်ခန်း! သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခြင်းက အန်ဒေါ်ဖင်လို့ခေါ်တဲ့ ခံစားမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်စေပါတယ်။ နာ...
မျိုးပွားနိုင်တဲ့ အသက်အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပုံမှန် မိန်းမကိုယ်ထဲက Vaginal discharge တွေ ဆင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ပမာဏ၊ အရောင်ပါဝင်မှုနဲ့ အနံ့တွေ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ဒါဟာရောဂါတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါပြီ။ ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဟာ internal factors တွေဖြစ်တဲ့ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု များခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို external factors တွေဖြစ်တဲ့ ပိုးဝင်ခြင်း၊ တစ်ကို...
Female Sterilization မမျိုးဥဖြတ်ခြင်း
မမျိုးဥတစ်ခုသားအိမ်တွင် သန္ဓေအောင်ရန် ဖြတ်သန်းသွားရသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်သားဥပြွန် (Fallopian Tubes) ကိုဖြတ်တောက်၍ ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့် သားကြောဖြတ်ခြင်း ကို Female Sterilization ဟုခေါ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင် အများစုသည် မိသားစုစီမံကိန်းအရ ပြည့်စုံပြီဟု ယူဆသောအခါ သားကြောဖြတ် လိုကြသည်။ ထို့အပြင် သန္ဓေတားဆေးများ စားခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများပြားလာမည့် အသက်အရွယ်တွင...